देउवा सरकारमा माके एक्लैलाई १० मन्त्रालय ! नयाँलाई नो चान्स...
ARCHIVE, NEWSPAPER » देउवा सरकारमा माके एक्लैलाई १० मन्त्रालय ! नयाँलाई नो चान्स...
सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा १० वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति जुटाएर थप मन्त्रालयको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन जनालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ । 'माओवादीले सबै पुरानै मन्त्रीपद खाइसकेका नेतालाई फेरी सरकारमा पठाउदै छ । नयाँलाई यसपटक पनि मन्त्री बन्ने अवसर छैन ।' एक नेताले भने ।